Guqula i-Outlook 2003 Unicode PST File ibe yi-Old ANSI Format - Umhlahlandlela Wezinyathelo Ngezinyathelo
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Guqula i-Outlook 2003-2010 Unicode PST File ibe yi-Old ANSI Format
Guqula i-Outlook 2003-2010 Unicode PST File ibe yi-Old ANSI Format
Qaphela: Kufanele ube ne-Outlook efakiwe ukusebenzisa lo mhlahlandlela.
Kusukela ku-Outlook 2003, kwethulwa ifomethi entsha yefayela le-PST enezinzuzo eziningi kakhulu kunendala. Ifomethi entsha ibizwa nangokuthi ifomethi ye-Unicode ngokujwayelekile, ngenkathi ifomethi yakudala ibizwa ngokuthi ifomethi ye-ANSI ngokufanele. Womabili la magama azosetshenziswa kulo mhlahlandlela.
Yize ifomethi entsha ingcono kakhulu kunaleyo endala, kwesinye isikhathi (mostly ngezizathu zokuhambisana) usadinga ukuguqula ifayela le-PST kwifomethi entsha ye-Unicode ibe yifomethi endala ye-ANSI. Isibonelo, ufuna ukudlulisa idatha ye-PST kusuka kukhompyutha ene-Outlook 2003-2010 iye kwenye ene-Outlook 97-2002 kuphela efakiwe.
IMicrosoft ayizange ithuthukise insiza engenza ukuguqulwa okunjalo. Kepha ungakhathazeki. DataNumen Outlook Repair ingakusiza kulolu daba.
Qaphela: Ngaphambi kokuguqula ifayela elisha le-Unicode PST nge DataNumen Outlook Repair, sicela uvale i-Microsoft Outlook kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha ifayela le-PST.
Khetha ifayela elisha le-Unicode PST njengefayela lomthombo le-PST elizolungiswa:
Njengoba ifayela le-PST likufomethi entsha ye-Outlook 2003-2010, sicela ucacise ifomethi yefayela lalo ku- “Outlook 2003-2010” ebhokisini le-combo eceleni kwebhokisi lokuhlela ifayela lomthombo. Uma ushiya ifomethi njenge- “Auto Determined”, lapho-ke DataNumen Outlook Repair izoskena ifayili lomthombo le-PST ukunquma ifomethi yalo ngokuzenzakalela. Kodwa-ke, lokhu kuzothatha isikhathi esengeziwe futhi akudingekile.
Ngephutha, DataNumen Outlook Repair izogcina idatha eguquliwe ibe yifayela le-PST elisha elibizwa nge-xxxx_fixed.pst, lapho i-xxxx igama lefayela lomthombo le-PST. Isibonelo, kufayela lomthombo le-PST i-Outlook.pst, ifayela eliguqulwe ngokuzenzakalela lizoba yi-Outlook_fixed.pst. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ungafaka igama lefayela eliguquliwe ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha igama lefayela eliguquliwe.
Njengoba sifuna ukuguqula ifayela le-Unicode PST libe yifomethi ye-ANSI, kufanele sikhethe ifomethi yefayela le-PST eliguqulelwe ku- “Outlook 97-2002” ebhokisini le-combo eceleni kwebhokisi lokuhlela lefayela eliguquliwe. Uma usetha ifomethi ku- "Outlook 2003-2010" noma ku- "Auto Determined", lapho-ke DataNumen Outlook Repair ingahluleka ukucubungula nokuguqula ifayela lakho le-Unicode PST.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Outlook Repair intando starukuskena nokuguqula ifayela lomthombo le-Unicode PST. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo, uma ifayili lomthombo le-Unicode PST lingaguqulwa libe yifayela le-ANSI PST elisha ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo elifana naleli:
Manje ifayili elisha eliguquliwe le-PST likufomethi ye-ANSI, engavulwa yiMicrosoft Outlook 97-2002.
Qaphela: Uhlobo lwedemo luzobonisa ibhokisi lomlayezo elilandelayo ukukhombisa impumelelo yokuguqulwa:
Kufayela elisha eliguquliwe le-PST, okuqukethwe kwemiyalezo nokunamathiselwe kuzothathelwa indawo imininingwane yedemo. Ngiyacela oda okufushane umnyuziki ukuthola okuqukethwe okuguqukile uqobo.